SPY381 - Fakan-tsarimihetsika miafina miafina an'ny OMG ho an'ny lehilahy - Vahaolana OMG
SPY381 - Fakan-tsarimihetsika miafina miafina an'ny OMG ho an'ny lehilahy
(1) Manara-maso sy miaro ny atin'ny trano toy ny fivoriana fandraharahana, efitrano fandriana, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, sy maro hafa.
(3) Miaro ny orinasanao / tranonao ny fakantsary amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo mpandika lalàna.
Fanamarinana Motion: Rehefa hita ny fihetsiketsehana, dia manomboka ny fandraisam-peo automatique ny fakantsary. Ary miaraka amin'ny Video Recording Real-Time, ity gadget mini-tabilao ity dia hanoratra amim-pahatokiana ny hetsik'ireo vahiny tsy manan-tsahala amin'ny fotoana mahamety azy ary ny halavan'ny horonan-tsary dia is1 minitra. Tohano ny fandraisam-peo an-tsarimihetsika.